RW Rooble oo qancinaya Guudlaawe | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo qancinaya Guudlaawe
Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa wada dadaal uu ku qancinayo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo ka hor yimid shirka uu iclaamiyay toddobaadkii hore Ra'iisul Wasaaraha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynayasha dowlad goboleedyada ku sugan Muqdisho ayaa caawa shir uga socdaa Hoteelka Decale ee gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
Ilo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in RW Rooble uu kulan is Xog-Waraysi ah uu la qaadan doono madaxda joogta Xillgan magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, ayaa qaadacay shirka uu ku baaqay Ra’iisul wasaaraha ee lagu waday in uu ka furmo magaalada Muqdisho.
Rooble ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu waday dadaallo toboggan oo uu ku doonayay in shirka uu yimaado Madaxweyne Guudlaawe. Madaxweyne Guudlaawe ayaa ku maqan dalka Turkiga oo uu aaday dhowr cisho ka hot, waxa uuna si rasmi ah u qaadacay shirkan oo lagu waday inuu furmo maalin kahor.
Guudlaawe ayaa ka carooday sida la sheegay farriin xalay lagu soo qoray qol WhatsApp ah oo ay kuwada jiraan Golaha Wadatashiga Qaran ee Soomaaliya kaasoo lagu iclaamiyay in shirka maanta uu furmi doono, Guudlaawe ayaa ku andacooday in aan laga talo gelin, lana iclaamiyay shirka isagoo waddanka ka maqan.